iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #856 by PAYSON
Ndandifumana i-imeyili evela kuPeter Hawthorne. Uvakala ngathi yena kunye nabanye asebenza nabo banqwenela ukudibanisa neRioooo. Kucelwa ufunde kwaye ukhangele ukuba awucingi ngathi kuvela ekupheleni kweendawo ezihamba phambili zokuhamba ngaphandle kwendawo. Khangela oko ucinga.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #857 by rikoooo
Uxolo kodwa andinayo inkcazelo yento othetha ngayo ...?
Kwaye andazi ukuba ngubani uPeter Hawthorne.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #858 by PAYSON
Dec 11 (usuku lwe-1 edlulileyo)
Ndivele ndifunde I-DOWNLOADS YE-FSX, i-FSX-Steam ne-Prepar3D - I-Rikoooo, ndiyibonise kwabanye oogxa kwaye sicinga ukuba intsebenziswano phakathi kwethu inokusebenza kakuhle.
Ndimelela i-arhente yokuthengisa yedijithali njengamanje isebenza kunye nenkampani ekhokhnoloji ehamba phambili esebenza kwiimakethi efanayo ne-Android. Sinqwenela ukubonisa isiqulatho esicacileyo kwisayithi lakho egameni lomxhasi wethu. Ngeli lungelo, siya kuvuyela ukuhlawula kwindawo ethile kwingingqi ye-$ 65.
Ndixelele iingcinga zakho.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #859 by PAYSON
I-2: I-34 AM (ii-13 iiyure ezidlulileyo)
Ndiyabulela ngokubuyela kum.
Ukukunika ingcamango kwento esenzayo, siza kukhangela ukubhala umxholo oxhaswe kwiziko lakho. Esi siqulatho siza kufumana ifom yegama le-500 kwaye siza kufaka isixhumanisi 'silandela' kumthengi wethu. Umbhali wale nqaku uza kuchitha ixesha kwisiza sakho kwaye uzive ngezwi, isitayela, kunye nomxholo wokuqulatha. Baya kuhamba baze babhale i-bhokisi edibeneyo kwiblogi yakho. Unokwenza uhlaziyo, uhlele kwaye unqatshwe le nqaku ukuba uyifumana ingafanelanga. Sifuna ukufaka isandla kwiziko lakho kwaye sikuhlawule ngelungelo lokuthumela. Nangona kunjalo, asiyibizi igama labathengi bethu okanye iimveliso kweli nqanaba - ngokuqhelekileyo kuphela xa amanqaku athunyelwa ukuba ahlaziywe.
Ngethuba nje ukhululekile, siyakucela ukuba iposi ayigcinwe njenge-'xhaswe '.
Kule nto, ngaba uya kwamkela izithuba ezixhasiweyo www.rikoooo.com/ ? Ukuba ixabiso esilinikeze kwi-imeyile yangaphambili (i-$ 65 ngeposi) yamkelekile kuwe, ndixelele nje ukuze siqhubeke.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #860 by PAYSON
Le yile imeyile engayifumanayo. Ndiyathemba ukuba ubona ukukhathazeka kwam. Andicingi ukuba ndifanele ndibone oku. Olunye uhlobo lweSNAFU.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #861 by rikoooo
Enkosi ngempendulo yakho,
Oku kunene ugaxekile kwaye ezo meyile zenziwe ngokuzenzekelayo nge-spammer okanye bot.
Musa ukuphendula kubo
Omnye umzekelo apha: www.mail-archive.com/[email protected]/msg28201.html
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-3 inyanga edlulileyo rikoooo.
Ixesha ukwenza page: 0.243 imizuzwana